Imigca yomoya yeDelta: Bonke abasebenzi abangagonywanga baya kuhlawuliswa imali engange- $ 200 nge-inshurensi yezempilo qho ngenyanga
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Imigca yomoya yeDelta: Bonke abasebenzi abangagonywanga baya kuhlawuliswa imali engange- $ 200 nge-inshurensi yezempilo qho ngenyanga
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Umphathi we-Delta Air Lines u-Ed Bastian
Kwiiveki ezidlulileyo ukusukela oko kunyuka i-B.1.617.2 eyahlukileyo, bonke abasebenzi baseDelta abebelaliswe esibhedlele nge-COVID khange bagonywe ngokupheleleyo.
I-Delta yokuhlawulisa abasebenzi abangafumananga ugonyo ngezibonelelo zezempilo.
Umgaqo-nkqubo we-inshurensi entsha ye-inshurensi yezempilo iqala ngoNovemba 1.
Umndilili wokuhlala esibhedlele kwi-COVID-19 kubize i-Delta i-50,000 yeedola kumntu ngamnye.
I-Delta Air Lines ibhengeze namhlanje ukuba bonke abasebenzi beenqwelomoya abangagonywanga ngokupheleleyo kwi-COVID-19 kuyakufuneka bahlawule ngaphezulu kweedola ezingama-200 ngenyanga nge-inshurensi yezempilo.
Imemo yeCEO yeDelta Air Lines kubasebenzi ithe "intlawuliso iyakufuneka ukuze kulungiswe umngcipheko wezezimali isigqibo sokungagonyi sidalela inkampani yethu."
Ngoku ka IGosa eliyiNtloko le-Delta u-Ed Bastian , "ukuhlala esibhedlele okuphakathi kwe-COVID-19 kuxabise i-Delta $ 50,000 ngomntu" kwaye "kwezi veki zidlulileyo ukusukela oko kunyuka i-B.1.617.2, bonke abasebenzi be-Delta abalaliswe esibhedlele nge-COVID khange bagonywe ngokupheleleyo."
Nangona iipesenti ezingama-75 ze Delta Air Lines Abasebenzi bagonyelwe le ntsholongwane, uBastian wathi "uburharha" be-COVID-19's Delta eyahlukileyo "kuthetha ukuba kufuneka sifumane abantu abaninzi abagonywayo, kwaye kufutshane neepesenti ezilikhulu kangangoko."
Olu tshintsho luza kuqala ukusebenza nge-1 kaNovemba, ngelixa nge-12 kaSeptemba, abasebenzi abangagonywanga kuya kufuneka bathathe uvavanyo lwe-COVID-19 ngeveki. Abasebenzi abangagonywanga kufuneka banxibe iimaski zobuso ngaphakathi.
Ukuphendula kukarhulumente nakwimizi-mveliso kwisigqibo senqwelomoya kwaxutywa. Abanye basincoma isigqibo sikaDelta, besithi “yindlela efanelekileyo” yokukhuthaza ugonyo kwaye ingenza “umahluko wokwenyani.”
Abanye, nangona kunjalo, ba lumkisile ukuba singabeka umzekelo ombi wokuba isigqibo sigqibe ngokusebaweni kwezemali, hayi inkxalabo yoluntu.
Ezinye iinqwelomoya, kubandakanya i-United Airlines, iAir Canada kunye neQantas zaseAustralia, zenza ugonyo ngokuchasene ne-COVID-19 enyanzelekileyo kubasebenzi.
Kwangoko kulenyanga, u-CEO u-United Kingdom u-Scott Kirby kunye no-Mongameli u-Brett Hart baxelele abasebenzi ukuba, nangona besazi ukuba abanye abasebenzi abasivumi esi sigqibo, "wonke umntu ukhuselekile xa wonke umntu egonyiwe."